I-Futuracha Pro, uhlobo loqobo olutshintsha njengoko ubhala | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-Futuracha Pro, uhlobo loqobo lohlobo olutshintsha njengoko ubhala
Ukusukela iGrisi yamandulo, ingcinga yokuchwetheza yaphathwa njenge obo bugcisa bunokwazi ukumela izicatshulwa, ngokukhetha ifonti kunye nemisebenzi yokuprinta
Kukho iindlela ezininzi zokuthiya igama lokuchwetheza nangona inkcazo yalo ibonakalisiwe kumhlathi odlulileyo, namhlanje siza kuthetha nge Iindidi ezi-4 ezikhoyo.
1 Iindidi ezahlukeneyo zokuchwetheza
1.1 Ukuhlela typography
1.2 Ubugcisa bokuchwetheza
1.3 Uhlobo lokuchwetheza oluncinci okanye uhlobo lohlobo lweenkcukacha
1.4 Uhlobo lweMacro typography
2 I-Futuracha Pro: Uhlobo olutsha lweTypography
3 Itshintsha imilo njengokuba ubhala!
4 Abantu abaninzi bayayazi iFuturacha!
Iindidi ezahlukeneyo zokuchwetheza
Oku kudibanisa imibuzo typoáficas ezinxulumene neentsapho, ubungakanani boonobumba, izithuba phakathi koonobumba namagama
Oku kuthathela ingqalelo unxibelelwano njengomfuziselo obonakalayo, apho isicatshulwa singenalo kuphela ukusebenza kweelwimi kwaye apho ngamanye amaxesha simelwe ngokomfanekiso, ngokungathi ngumfanekiso.
Uhlobo lokuchwetheza oluncinci okanye uhlobo lohlobo lweenkcukacha
Oku kwasetyenziswa okokuqala ngezixhobo ezinje ngoonobumba, isithuba phakathi koonobumba, igama, isithuba phakathi kwamagama, isithuba somgca kunye nekholamu.
Uhlobo lweMacro typography
Ujolise kuhlobo lochwethezo, isimbo sonobumba, kunye nomzimba weleta.
I-Futuracha Pro: Uhlobo olutsha lweTypography
Sele ingumbandela wobukrelekrele kunye netekhnoloji eninzi kwezi ndlela zintsha zokuphuhlisa xa zimela izicatshulwa. Thina bantu sihlala sifuna ukuhambisa uqobo kunye nokunyaniseka kwayo yonke into esiyenzayo kunye nayo I-Futuracha, asizukukhetha.
Ngokwinto enokufunyanwa kwiwebhu, indlela ekuchongwa ngayo i-Futuracha ine "ifonti yeversión ihonjiswe ngokhuthazoóubugcisa-déco yemyuziyam engalindelwanga: iqhude laseCaribbean".
Nangona kunjalo, kubonakala ngathi kuyinto encinci ukuqonda ukuba ukutolikwa komntu owaziyo umxholo we-Futuracha okokuqala, kodwa ngokuhamba kwexesha kunye nokubona, imeko yendalo yayo iyaqondwa ngakumbi.
Itshintsha imilo njengokuba ubhala!
Umyili wayo ubanga ukuba njengoko isicatshulwa siphuma ngakumbi nangakumbi, lo typefaceíilunge kakhulu kwifomathi yokubonisaón iyathandeka emehlweni kwaye imele olona luvo luphambili lochwethezo. Kwaye ukuba ayonelanga, uluvo lomntu ongumdali ngokwakhe lushiya ungathethi: «I-Futuracha, andazióInayo imihlobiso kodwa uninzi lwazo onokukhetha kuzo. Beka ubuchule ecaleni kokusebenza, dlala phambi komkhombandlela, kunye nokulinga.ón phambi kweencwadana«.
Kule ngxelo ingaphambili, umnini kunye nombhali wesiginesha yokuchwetheza, uzithelekisa nezinye iinguqulelo zokhuphiswano kwaye ayazise ukuba iprojekthi yeFuturacha iyinyani.
Abantu abaninzi bayayazi iFuturacha!
Kumazwe angaphezu kwe-120, oku Uhlobo lohlobo lohloboía Sele ikhutshiwe kwaye igcinwe engqondweni, eyona nto ibalulekileyo malunga noku kubhala lithuba lokuhlengahlengisa umxholo wakho njengoko ubhala okanye uhlela. Nangona kunjalo, ayizizo zonke izinto ezimisa apho! Sele zininzi izicelo ezaziwayo kunye nezixa ezikhulu zeelogo eziqale ukusebenza kuyilo lwabo ngeFuturacha kwaye ngoku bane ipothifoliyo yelogo ekhethekileyo wenze umbulelo kolu hlobo lochwethezo.
Abona bantu banobuchule ngabo abafumana okuninzi kwesi sixhobo, ngaphandle kwamathandabuzo. Iqwalaselwa ngabaqulunqi abaninzi bemizobo, Enye yeendlela ezilungileyo zokubhala isicatshulwa sakho kwaye ubanike intsingiselo yobuqu kunye negama ngalinye elibhalayo.
Musa ukuhlala ungangcamli! Ngapha koko, ukuba ayisiyonto uyithandayo ukubhala kunye neefonti ezahlukeneyo, ungathandabuzi ukuhlala phantsi kwaye ucinge ukuba ngaxa lithile usenokuyidinga kwaye kukho iiseva kuyoíkunye ukuba ngenye imini ufuna ukuma apho kwaye ubulale ixesha elincinci. Kodwa inyani kukuba ngale typography intsha, ziya kubakho ngakumbi nangakumbi kwaye ziyahlukahluka iikhonsepthi.
I-Futuracha ibonwa kuyo yonke indawo, ngakumbi ukusukela ngala mhla wokuqala apho umdali wayo wayeyalelwe ukuba enze uhlobo lohlobo lwesihloko kwisifundo kwaye waphefumlelwaó kumaphela amabini aseCaribbean Ndijonge iklasi yomzekeliso. Ikhuthazwe ngu "iimpondo neempondo zenyawo zakhe.«
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » I-Futuracha Pro, uhlobo loqobo lohlobo olutshintsha njengoko ubhala
Iintsuku ezingama-36 zohlobo: Hlanganisa bonke abaYilo
Imbali yeAdobe Illustrator